Ama-FAQs - UJinan JCUT CNC Equipment Co, Ltd.
Lesi isikhathi sokuqala ngithenga lo mshini, kulula ukuwenza?
Singanikeza incwadi yokusebenza noma ividiyo yokuqondisa. Uma kunzima kuwe ukufunda, futhi singakusiza ngo- "Team Viewer" online, ngocingo noma nge-Skype chaza.
Ungawukhetha kanjani umshini ofanele?
Ungasitshela impahla esetshenziswayo, usayizi, kanye nesicelo somsebenzi womshini. Singancoma umshini ofaneleka kakhulu ngokusho kwesipiliyoni sethu.
Ngingayethemba kanjani inkampani yakho nemikhiqizo yakho?
Yonke inqubo yokukhiqiza izoba ngaphansi kokuhlolwa njalo nokulawulwa kwekhwalithi okuqinile. Umshini ophelele uzohlolwa ukuze uqiniseke ukuthi bangasebenza kahle ngaphambi kokuphuma fektri. Ividiyo yokuhlola nezithombe izotholakala ngaphambi kokulethwa.
Uma umshini unenkinga ngemuva kokuthi ngiyiyalile, yini engingayenza?
Izingxenye zamahhala zithumela kuwe ngewaranti yomshini uma umshini unenkinga. Impilo yamahhala yokuthengisa ngemuva kokuthengisa yomshini, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi uma umshini wakho unenkinga. Sizokunikeza insizakalo engamahora angama-24 kusuka ocingweni naku-skype.
Yebo! Samukela kakhulu amakhasimende ukuvakashela ifektri yethu!
Luthini usuku lwakho lokulethwa?
Ngomshini ojwayelekile, cishe izinsuku eziyi-15; Ngomshini owenziwe ngokwezifiso, cishe izinsuku ezingama-20 zokusebenza.
I-MOQ yethu ingumshini osethiwe ongu-1. Singathumela umshini ethekwini lakho ezweni lakho ngqo, sicela usitshele igama lakho lechweba. Kuzoba nokuhamba kahle kwezimpahla zokuthumela kanye nentengo yomshini oyithumela kuwe.